Xiisado iyo olole looga horjeedo maamulkii dowladu u magacowday gobolka Bay oo ka taagan Baydhabo – idalenews.com
Xiisado iyo olole looga horjeedo maamulkii dowladu u magacowday gobolka Bay oo ka taagan Baydhabo
Olole iyo xiisado looga soo horjeedo maamul KMG ah oo dhowaan madaxweynaha Somalia uu u magacaabay gobolka Bay ayaa laga dareemayaa magaalada Baydhabo kaasoo uu hormuud ka yahay gudoomiyihii xilka laga qaadi qaaday ee gobolkaas C/fitaax Geesey oo diiday inuu xilka wareejiyo.
Waxaa magaalada Baydhabo qeybo badan oo ka mid ah ka socda shirar iyo munaasabado qado ah oo gudoomiyaha xilka laga qaaday uu u sameynayo waxgaradka gobolka, isagoo ka raadinaya taageero ku aadan iney ku raacaan diidmada uu kala soo horjeedo maamulka dowladu ay daba ka riixeyso.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in dowlada Somalia ay damacsan tahay iney adeegsato ciidamada AMISOM iyo kuwa Itoobiya si ay ugu qasbaan masuuliyiinyii maamulka xilka qaaday iney baneeyaan xafiisyada si ay ugu shaqeeyaan maamulka cusub ee la magacaabay.
Guddoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Bay, C/fitaax Ibraahim Geesey ayaa si cad uga soo horjeestay wareegto ka soo baxday dhowaan xafiiska madaxweynaha Somalia, taasoo xilka looga qaaday maamulkiisa, maamul cusubna loogu magacaabay gobolka Bay iyo magaalada Baydhabo.
C/fitaax Ibraahim Geesey intaa ku daray in soo saarista wareegtadan aan loo marin habkii sharciga ahaa, wuxuuna sheegay inuu isagu yahay weli guddoomiyaha rasmiga ah ee gobolka Bay, maamulka cusub ee loo magacaabay gobolkana uu yahay mid aan waxba ka jirin oo sharci daro ah, wuxuuna tilmaamay inuu xilka ku wareejinayo maamul dadka degaanku soo doorteen.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Soo Gebagebeeyey Kulammo Uu La Qaadanayey Qeybaha Bulshada Gobolka Hiiraan